Waxyaabaha Sababa Cuqdad Nafsiga Iyo Dadka U Nugul Inuu Ku Dhaco - Daryeel Magazine
Waxyaabaha Sababa Cuqdad Nafsiga Iyo Dadka U Nugul Inuu Ku Dhaco
Waa maxay Cuqdad Nafsi?
Cuqdad Nafsigu wuxu ka mid yahay cudurada ku dhaca admiga gaar ahaan qalbiga ama maskaxda kaas oo ka dhiga qofka ku dhaca sida qof maqan ama mar walba xanaagsan , ama inuu gaar uga baxo dadka kale asiga oo dhibsanaya hadalka badan iyo arkida dadka u karahsanaaya.
Haddaba yuu ku dhacaa Cuqdad Nafsiga?
Sida ay u sheegeen dhaqatiirta ku takhasusay Cilmu Nafsiga ay sharaxeen cida si rasmiga ugu dhaco iyo wadama ay u badan yihin, Cuqdad Nafsi ayaa waxa uu ku dhaca dadka ka soo safra wadamadooda yimaadana wadamo kale si ay ugu nolaadaan ama ay wax ugu bartaan sida dadka Soomaalida oo dunida kusii faafaya.
Kuma koobna oo kaliya Soomaalida ee waxa kale oo jira dad badan oo ajaanib ah oo ku dalka Suuadan haba u badnaadaanee dadka ka yimid Asia oo ka imaaday wadamo qabow soona gaaray wadan kuleel kuwaaso ku jajabay Cuqdad Nafsigu.
Maxaad u taqaanaa Cuqdad Nafsigu?
Cudurkani Cuqdad Nafsigu waxa uu aad ugu dhowyahay B.F-ta gasha neerfaha. Taaso qofki qaba aan la hadlin umada kale weligisna iska xanaqsan markaad fiiriso uu dood ku qabsanaya qofna aan wax ka haleen.
Maxaa sababa Cuqdad Nafsiga?
Waxa sababa Cuqdad Nafsiga murugada badan iyo waxa loo yaqaana shiidka uu soo weeraro qofka iyo niyad jabka qofka ku dhaca.
Dalkee ayuu ugu badan yahay Cuqdad Nafsigu?
Waxaa uu ugu badan yahay Suudaan, Wadankan Suudaan ayaa waxa u ku dhacaa ardayda ajaanibta ah iyo qaar ka mid dadka u dhashay wadanka, iyada oo wadankan dadka inta badan ka cawaadaan Cuqdad Nafsiga.
Sidee looga badbaadi karaa ama looga hortagi karaa Cuqdad Nafsiga?
Waxa taqaatirka inta badan ugu baaqaan dadka qaba Cuqdad Nafsiga in ay tagaan rugta Cilmi Nafsiga ee ugu dhow ama ay bulshada dhax galaan.
Waxaan aragnay markuu ku qabto Cuqdad Nafsiga haddii aad dhax gasho bulshada u ku daynaayo wax yar ka dib, u kalama soocna Cuqdad Nafsiga yar iyo wayn iyada oo qofkii murug soo weerarta uu fa’idesanaya ugu dambeyna noqonaya qof haya Cuqdad Nafsi.
Faham La’aanta Waalidka Ayaa Sababta in Ilmaha Cudurka Nafsiga Ahi Kusii Fogaado Waxyaabaha Sababa Caado Wareerka Dumarka 7 Caado Oo Sababa Cimri Degdega Iyo In Calaamadaha Gabowgu Qofka Goor Hore Kasoo Muuqdaan 10 Caado Oo Qofka Joogteeya Ka Caawiya Inuu Kasbado Qalbiyada Dadka Ku Xeeran & Bulshada